Nhau - Inopenya sei machubhu kugara kwenguva yakareba
Muchokwadi, yega yega yekupisa magetsi chigadzirwa ine hupenyu hwayo hwebasa. Zvishoma zvemagetsi kupisa zvigadzirwa zvinogona kusvika anopfuura makore gumi. Nekudaro, kana iyo inopenya chubhu ikashandiswa uye ichichengetwa nemazvo, iyo inopenya chubhu inogara yakasimba kupfuura zvakajairika. Rega Xiao Zhou azviise kwauri. , Maitiro ekuita iyo inopenya chubhu kuti igare yakasimba.
Izvo zvinorambidzwa kuwandisa kuwanda kwekushandisa kweanopenya machubhu kwenguva yakareba. Imwe neimwe inopenya chubhu ine muganho wayo wekushandisa. Kana ikapfuura huwandu, zvinowanzoita kuti isagare.
Kana tembiricha tembiricha iri madhigirii mazana mana, yeuka kuti usatonhora pasi nekukurumidza;
Usabata iyo inopenya chubhu paunenge uchirodha nekuburitsa.
Kana iyo inopenya chubhu yevira iri kushanda, gara uchitarisisa kuti marobhoti ari pane control panel akajairika, nekuti marobhoti anofanirwa kuchinjaniswa kwenguva yakati panguva yekuchengetedza kupisa, kuti usapisa iyo inopenya chubhu nekuda kwe kutadza kwekuchinja switch.
Munguva pfupi yapfuura, Chikwata chedu chakabudirira kugadzira TANKII APM. Iyo yepamusoro poda metallurgical, kupararira kwakasimbiswa, ferrite FeCrAl alloy iyo inoshandiswa pathubhu tembiricha kusvika kuna 1250 ° C (2280 ° F).
TANKII APM machubhu ane yakanaka fomu kugadzikana pakakwirira tembiricha. TANKII APM inogadzira yakanakisa, isina kuyera pamusoro oxide, iyo inopa chengetedzo yakanaka munzvimbo zhinji dzevira, kureva Oxidising, sulphurous uye carbonaceous gasi, pamwe nekupokana nedhipoziti dzekabhoni, madota, nezvimwewo Kusanganiswa kweakanakisa oxidation ehupfumi uye kugadzikana kunoita iyo alloy yakasarudzika.
Chaizvoizvo kunyorera kweTANKII APM kune anopenya machubhu mune emagetsi kana gasi anopisa mafesi seyakaenderera galvanizing mavira, chisimbiso kudzima mavira, akabata mavhenji uye dosing mafesi mualuminium, zinc, lead maindasitiri, thermocouple dziviriro machubhu, vira muffles yekukanganisa sintering.
Tinogona kupa APM nenzira yewaya uye chubhu. Kugamuchirwa kuodha kana kubvunza.
Ribbon Alloy Bayonets, Sayenzi Kunyorera, Nickle Chrome Alloy Wire, Kuayina Machines, Nichrome, Ion Nitriding,